सोमबारदेखी सवारी चालक अनुमति पत्रको फाराम अनलाइनबाटै भर्ने - Sitemap
Loading... सोमबारदेखी सवारी चालक अनुमति पत्रको फाराम अनलाइनबाटै भर्ने
काठमाडौँ, १० पुस | सरकारले सोमबारदेखी सवारी चालक अनुमति पत्रको फाराम अनलाइनबाटै भर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्दैछ। आइतबार उद्घाटन गरिने भए पनि अनलाइन आवेदन फारम संकलनको काम भने सोमबारबाट मात्र अघि बढाईने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
अनलाइन फाराम यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा गएर फाराम भर्न सकिन्छ। अनलाइनमा फाराम भरेर पठाएपछि दर्ता नम्बर र कार्यालयमा सम्पर्क राख्न जाने समय अनलाइनबाटै दिइने विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए।
“कार्यालयमा सम्पर्क राख्नका लागि हाललाई एकान्तकुनामै जानुपर्छ, भक्तपुरको सल्लाघारी एवम् काठमाडौँका चाबहिल र कलङ्कीमा पनि सेवा सुरु भएपछि त्यहाँबाट पनि अनलाइनबाटै सवारी चालक अनुमति पत्रसम्बन्धी काम हुन्छ”–उनले भने।
यो सेवा सुरु भएपछि मध्यरातदेखि यातायात सेवा कार्यालयमा अनुमति पत्रको फाराम भर्न लाइनमा बस्न नपर्ने विभागले जनाएको छ ।
एजेन्सी - तपाई कत्तिको सेक्स गर्न मन पराउनुहुन्छ ? सातामा एक, दुई या तीनपटक ? त्यसो त सेक्स जोडीको अवस्था, वातावरण तथा मुडमा पनि भर पर्छ । समय समयमा सार्वजनिक हुने सेक्सबारे गरिएका अध्ययनमा सेक्स...
विराटनगर। विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालले आफ्नो छैंँठौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा न्युरो सर्जरीकालागि बढ...